AH: ပြန်ပါဦးမည် ပြန်ဦးမည်
လေယဉ်လက်မှတ်က MAI ကြိုဝယ်ဖို့ ဟို ပက်စပို့တို့၊ ကဒ်သက်တမ်းတိုးတာတို့က ဘယ်နေ့ရမယ်မှန်းမသိလေတော့ မနေ့ကမှ ၀ယ်လိုက်တာ ၆၈၀ နဲ့ နှစ်ယောက်ပေါင်းလေတော့ ၁၃၀၀ ကျော်ကျော်က ချော။ မပို့ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်ကို ပိုက်ဆံလွှဲ လူလည်း ဖျားချင်သလိုလို၊ နေမကောင်းချင်သလိုလို ဖြစ်ကရော။ သို့ပေမယ့် ကီလို က တစ်ယောက်ကို ၄၀ လောက်ရလေတော့ နှစ်ယောက်ပေါး ကီလို ၈၀ ရဒယ်။ ပစ္စည်းတွေ တော်တော်များများ ပြန်ယူသွားမယ်ဆိုပြီး အခန်းရှင်းလိုက်က စောစောလေးကမှ ပြီးတော့တယ်။ မမြသွေးနီပြောသလိုပဲ ပိုထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေ ဟောကဒါ တို၊ ဟောဒါက မတော်နဲ့ အဲ့ဒါတွေ မိဘမဲ့ ကလေးကျောင်းသွားလှုမယ်ဆိုပြီး အထုတ်ထုတ်ပြီး ယူလာတာ။ ကိုယ့်ဖို့က အိတ်သေးသေးလေးတစ်လုံးရယ်။ ဒါတောင် ရှု့မငြီးက ဟိုဟာလေးက သမျှောစရာ၊ ဒီဟာလေးတော့ ကြိုက်သေးတယ် ၀တ်လို့မရတော့လို့နဲ့ ပွစိ ပွစိ။ အိတ်ကြီးအိတ်ငယ်အသွယ်သွယ်နဲ့၊ အိတ် ၆ လုံးလောက်နဲ့ ဘယ်လို လေဆိပ်ဆင်းရမယ် မသိသေးဘူး။
ပြန်ရင်လည်း အချိန်ကသိပ်မရလေတော့ ဒရွတ်တိုက်ပြီး ဟိုပြေး ဒီပြေးပြေးရဦးမယ်။ ရန်ကုန် ခဏ၀င်၊ ပြီးရင် နယ်ဆင်း၊ ချောင်းသာကလည်း သွားချင်သေး၊ ဟိုဟာစားချင် ဒီဟာစားချင်နဲ့ တက်သုတ်ရိုက်ရဦးမယ့်ပုံ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောဖို့တောင် အချိန်သိပ်ရှိမယ် မထင်။ မတတ်နိုင် ရသလောက်တော့ ရောက်သလောက် ခြေဆန့်ရဦးမည်။ ပြန်လာရင်လည်း နားဖို့ရယ် မရှိ။ သင်္ဘောအသစ်တွေက ဒီဇိုင်းအဆင့်မှာတင် တစ် နေသည်။ နှစ်လနောက်ကျနေပြီ။ သင်္ဘောကျင်းက သံပြားဖြတ်မယ် တကဲကဲ။ ကျွန်တော့် ဆရာသမား အသစ်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပြန်ပါလို့ ပြောပေမယ့်၊ သူ့ တစ်ယောက်ထဲ ၀န်တွေပိနေပြီ။ ကျန်သော ပိုက်၊ စက်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ် ဒီဇိုင်းတွေ ဘာမှ ပြီးဦးမည်မထင်။ ပြန်သွားပြီး တွန်းရဦးမည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မရောက်တာကြာပြီဖြစ်သော မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ရမည်ကို အလွန်ပျော်လှသည်။ အချိန်ရသလောက်လေးတော့ ပျော်လိုက်ဦးမည်။
စီလုတ်ပြည်ပြန်လျှင် ရှု့မငြီးကို တစ်ပါတည်း ခေါ်သွားဖို့တော့ စီစဉ်ထားသည်။ သူကတော့ စင်ကျားပေါက အလုပ်ကို ထွက်ပစ်လိုက်ပြီ။ ထိုသို့မှ မလုပ်လျှင်လည်း နှစ်ယောက်အတူနေဖို့ရယ်က အတော်မလွယ်သောအဖြစ်။ သို့သော် သူ့အတွက် စီလုတ်ကဗီဇာ သက်တမ်းက ဘယ့်နှယ်တိုးရမယ်မသိသေး။ စီလုတ်မင်းကြီးများ ဖေးဖေးမမနှင့် ထောက်ခံချက်ပေးလျှင်တော့ အကြာကြီးနေလို့ရနိုင်သည်။ စင်ကျားပေါက အိမ်ခန်းကို လက်လွှတ်လို့ကလည်း မလွယ်လှ။ သူဟိုမှာ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးမရလို့ ကမောက်ကမဖြစ်လျှင် သောင်ပြင်မှာ လွှတ်လိုက်သော ရွှေဟင်္သာလေးတွေ ဖြစ်မည်။ ဒီတော့ နှစ်ယောက်သား ယောင်ပေယောင်ပေနှင် တောင်ပြေးမြောက်ပြေးဖြစ်ကုန်မည်။
ရွှေပြည်ကြီးပြန်ရောက်လျှင် လုပ်စရာ အများကြီး စီစဉ်ထားသည်။ ရွှေတိဂုံဘုရားသွားမည်၊ ရေလှုမည်။ မြေနီကုန်း ရွှေမန်းရုံဘေးက အဘိုးကြီးရောင်းတဲ့ ၀က်သားဒုတ်ထိုး စားမည်၊ YKKOက ကြေးအိုး သောက်မည်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ ရွှေရင်အေးသောက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ကြာဇံကြော်နှင့် ၀က်သား တစ်ပွဲ ၀က်သားလိပ်တစ်ပွဲစားမည်၊ လမ်းဘေးက အသုတ်ဆိုင်တွေ သွားစားမည်၊ ပုသိမ် မိဘမဲ့ ကလေးဂေဟာသွားပြီး လှုမည်။ နောက်ပိုင်းတော့ မိဘမဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ် ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံဖို့ ရည်စူးထားသည်၊ သို့သော် လောလောဆယ် မဖြစ်နိုင်သေး။ ပိုက်ပိုက် မချိပါ။ ပုသိမ်က ညဈေးတန်းလျှောက်မည်၊ တွေ့တာတွေ အကုန်ဝယ်စားမည်။ ချောင်းသာသွားပြီး အုန်းသီးထဲ အုန်းရည်နည်းနည်းရယ် ၀ီစကီလေးနည်းနည်းရယ် ရောပြီး ပိုက်နှင့်စုပ်သောက်ချင်သည်။ မြေနီကုန်းက ၀က်ခေါက်သုတ် နဲ့ ထမင်းနဲ့ စားမည်၊ ဓနုဖြူဒေါ်စောရီဆိုင်က ၀က်ပုန်းတို့၊ ၀က်ဒညင်းတို့ စားမည်။ ရှော့ရှိတယ် ရှောရှိတယ်ဆိုလားဘာလား ရုံတင်နေသည်တဲ့ အချိန်ရလျှင် သွားကြည့်မည်။ ပုသိမ်က ဟာလ၀ါခြောက်နှင့် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ပြီး ထွေရာလေးပါး လေပန်းချင်သည်။ ငယ်သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် နှစ်ခုကလည်း အမှီပြန်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ နှစ်ခုစလုံး လွတ်သွားပြီ။ မတတ်နိုင် ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရတာကိုး။ တစ်ယောက်က ပြီးသွားပြီ၊ နောက်တစ်ယောက်က မမှီ။ မဒမ်ကိုးက မတော်မတရားစားတာတွေ မတင်ပါနဲ့ဆိုလို့ အခု စာလေးသာရေးပြီး ကြိုပြောသွားပါတယ် ခင်ဗျား။
ခုတော့ လေဆိပ်မဆင်းခင်လေး ဒီပိုစ်လေး ရေးခဲ့ပါပြီဗျို့။ ဒီကနေ့ည ၉နာရီခွဲလောက် လေယဉ်ထွက်ပါမတဲ့။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် မောင်အေအိတ်ခ်ျသည် ဘလော့ဂ်ပေါ်မှ ကိုးနတ်ရှင် ကောင်းမွန်မှု့၊ မကောင်းမွန်မှု့ပေါ်မူတည်၍ ပေါ်တစ်ခါ ပျောက်တစ်လှည့် ဖြစ်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကြွရောက်လာသူ ဘလော့ဂ်ဂါကြီးများ၊ ဧည့်သည်တော်ကြီးများကို ကျွန်တော့်၏ စုံစီနဖာ ရေးချင်ရာလျှောက်ရေးနေသော ကြွက်သိုက်မှာ ကျေးဇူး ဥပသကာယ အထူးတင်ရှိပါကြောင်း။
Posted by AH at 12/15/2011 05:37:00 PM
TZH1985 December 15, 2011 at 6:27 PM
လေယာဉ်လက်မှတ်က ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ... ရတာတောင် ကံကောင်းတယ်... အလုပ်တွေ အင်တာနက်တွေကို ခဏမေ့ခဲ့လိုက်တော့... ကဲ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့စေ ခရီးလမ်းလည်း သာပါစေ... ဗျာ...
AH December 15, 2011 at 6:35 PM
ကျေးဇူးပါခင်ဗျား.... See you soon.
ကိုထွဋ် December 15, 2011 at 6:41 PM
ကိုအောင်ထွဋ် ကျနော်လဲ စနေနေ့ ရန်ကုန်ပြန်မှာဗျ.. အခွင့်ကြုံရင်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ...
စံပယ်ချို December 15, 2011 at 7:01 PM
မိဘမဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ် ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံဖို့ ရည်စူးထားသည်၊ အဲတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ
စားကြပါသောက်ကြပါ သူတို့တွေပဲပြန်နေလိုက်ကြတာ မနာလိုဘူး
ဘိုဖြူ December 15, 2011 at 8:12 PM
khin oo may December 15, 2011 at 9:18 PM
mstint December 15, 2011 at 10:38 PM
ဆန္ဒရှိသမျှတွေအားလုံး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပေါ့ မောင်အောင်ထွဋ်ရေး)
Candy December 15, 2011 at 11:28 PM
အားကျလိုက်တာ.. ပြန်ချင်တယ်.. စားချင်တာတွေလည်း များကြီးပဲ အဟင့် :(
မောင်ဘုန်း December 16, 2011 at 1:11 AM
အင်း ...အားကျ လိုက်တာ ... ပြန်မို့တွေးမိရင် ... အား ...
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 16, 2011 at 1:40 AM
သူများတွေမို့ အိမ်ပြန်ရင် အရမ်းအားကျတာပဲ....ပြန်ချင်လိုက်တာနော်...
blackroze December 16, 2011 at 2:54 AM
ကိုရင် December 16, 2011 at 4:18 AM
အခုလို ရွှေပြည်ကြီးကို ပြန်မယ်ဆိုတော့ ကိုအွတ်ထောင်အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ခံစားရသဲရှင်..အဲ..ဗျာ.. :D
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် December 16, 2011 at 12:50 PM
မဒမ်ကိုး December 16, 2011 at 1:19 PM
အို မကြားချင်ဘူး မကြားချင်ဘူး အရမ်းအရမ်းကို စိတ်နာတယ် .(နားနှစ်ဖက်ကိုလက်နှင့်ပိတ်ပြီး ခေါင်းခါကာ ချာခနဲလှည့်ထွက်သွားသည် ..း)
မောင်မောင် December 16, 2011 at 1:27 PM
အားလုံး အဆင်ပြေ ချောမွေ.ပါစေ အစ်ကိုအာင်ထွဋ်ရေ။ ပျှော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အိမ်ပြန်ခရီးလေး ဖြစ်ပါစေ။
မြသွေးနီ December 16, 2011 at 5:35 PM
Arr kya del.We'll go back next year.Kyar htar par.
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 18, 2011 at 1:35 AM
နေရင်းထိုင်ရင်း သူများပါ စားချင်လာတယ်..
ဘယ်ရမလဲ တို့များလဲ နောက်လကျရင် သွားစားတော့မှာ..
ကို AH တို့နဲံ့များ တွေ့ဦးမလားမသိဘူး
လမ်းမှာ ခပ်ချောချော အတွဲတစ်တွဲတွေ့ရင် ကို AH တို့ဘဲဆိုပြီး လှမ်းခေါ်လိုက်မယ်နော
ပြည်တော်ပြန်ခရီး အစစ အဆင်ပြေပါစေ
သာယာသော အချိန်ကောင်းတွေ ရပါစေ
925 December 19, 2011 at 10:51 PM
EEEE...ကျွန်တော်လဲ မပြန်ရတာကြာ P ... အိမ်ကိုလွမ်းလိုက်တာ တအားပဲ
ညိမ်းနိုင် December 24, 2011 at 11:49 PM
ပျော်စရာကြီးပါလား ကိုအွတ်ထောင်ရေ...ကျွန်တော်က ဖေဖော်ဝါရီမှ ပြန်ရမယ်
ဗျိုး....၊ပျော်ရွင်ကြည်နူးဖွယ် ခရစ်စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူးကာလ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်
မောင်သီဟ December 26, 2011 at 10:05 PM
ရွာပြန်တာ ကြာလှချည်းလားကွယ်ရို့ ရွာမှာပျော်နေတာထင်တယ်း)း)